सामाजिक सञ्जालमा अपाङ्गताका सवाल – National Federation of the Disabled – Nepal
अहिले ठाउँ बनाए त भोलि तिमीहरूलाई पनि त सजिलै हुन्थ्यो । गाडी दुर्घटना, भूकम्प, बाढी-पैरो आदि आकस्मिक बिपत वा घटनाले “यो त ठूलो नेता हो, यसलाई अपाङ्ग नबनाऊँ” भन्दैन क्यारे …।
अपाङ्गता भएका समुदायको “राजनीतिक अधिकार” संविधानमा सुनिश्‍चित गरिएन भने संसारकै समावेशी भनेर फुर्ति लगाएको संविधानसभाले हाम्रो रिले अनशन त त्यसै तुहायो । अब हाम्रो सामूहिक आत्मदाहको जिम्मा लिन तयार भए हुन्छ । “कि सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार देऊ कि सामूहिकरूपमै मार ।”
गगन थापा – भाग ८, धारा ८८ को उपधारा २ मा अपाङ्गता भएका व्यक्ति थप गर्न पहल गर्छु ।
कृष्णप्रसाद सिटौला – म पहल गर्छु, डा. भट्टराईलाई भेट्नुस् ।
डा. बाबुराम भट्टराई – तपाईंहरूको माग जायज हो, सिटौलालाई भेट्नुस् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला – राजनीतिक अधिकार आवश्यक छ, कहाँ के थप्ने ? चिन्न लगाउनुस्, म कुरा राख्छु । अन्य राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेतालाई भेट्नुस् ।
बामदेव गौतम – तपाईंहरूलाई राजनीतिक अधिकार किन ? हामी छौं नीति बनाउँछौं, बस्नोस् खानोस्, भौतिक उपस्थिति किन चाहियो ?
विद्या भन्डारी – यो जायज कुरा हो, कुरा राख्छु ।
पुष्पकमल दाहाल – परिवर्तन आवश्यक छ, कृष्णप्रसाद सिटौलाले थप्न सकिने भनाइ राख्नुभएको छ । उच्चस्तरीय बैठकमा प्रस्ताव राख्नेछु । यो भन्दा सुधार भएर आउँछ ।
केपी ओली – तपाईंहरूको कुरा बुझें ।
माधव नेपाल – कुरा बुझेको छु । ३० लाखको सङ्ख्यामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुटाउनु हुन्न ।
रामचन्द्र पौडेल – संशोधन गराउनुपर्छ । ल अब एकसरो भेटघाट भयो, “संविधान हामीलाई चाहिन्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कहाँ छाड्न पाइन्छ” भनेर सडकमा निस्कनुपर्छ ।